Amandla we-ALT ne-TAB | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 25, 2010 NgoMsombuluko, Januwari 1, 2018 URobby Slaughter
Uma kukhulunywa ngobuchwepheshe bekhompyutha, ngiyamangala ukuthi bangaki abantu abangazazi kahle izinkinobho ezimbili ezibaluleke kakhulu kukhibhodi yakho. Amandla amangalisayo we-ALT ne-TAB aqukethe ezinye zezeluleko ezibaluleke kakhulu zokukhiqiza kunoma ngubani osebenzisa ikhompyutha ukukhuthaza noma ukuqhuba ibhizinisi labo. Ngamanye amagama: cishe wonke umuntu manje ufunda iMartech!
Ukuqonda kahle inhlanganisela ye-ALT + TAB, sidinga ukuqala ngengxoxo yokhiye we-ALT. Cishe uyazi ukuthi i- "ALT" isifushane ngokuthi “enye.” Lokho kusho ukuthi le nkinobho encane ihloselwe ukushintsha wonke umsebenzi wesixhumi esibonakalayo somsebenzisi wamanje. Abathakathi bamaKhompyutha kwesinye isikhathi babiza lokhu ngokuthi “ukushintshwa kwemodi.” Ukucindezela inkinobho “ALT” kutshela umshini ukuthi uziphathe kahle ngokuhlukile ngokuphelele ukwedlula njengamanje.
Lokhu kungabonakala ngokweqile. Ngemuva kwakho konke, ukhiye we-SHIFT ubonakala wenza okufanayo ngokuqala nje. Kepha i-SHIFT imane ishintshe izinhlamvu ukusuka kosonhlamvukazi kuya kwabaphansi. I- “A” ngokuyisisekelo iyafana ne- “a.” Eqinisweni, imishini yokubhala emidala yayiqukethe womabili amakhophi ezinhlamvu. Ukhiye we- "ALT" uthatha umshini wakho ungene ezweni elisha.
I-ALT + TAB eyodwa
Kungabonakala ngathi akwenzeki lutho uma ushaya i-ALT. Cindezela bese ukhipha ukhiye izikhathi eziyishumi nambili futhi awuzukuphendula umshini weWindows noma we-Mac. Kepha uma ubamba ukhiye we-ALT phansi bese ufinyelela ngaphesheya bese ucindezela ukhiye we-TAB kanye umzuzwana nje bese ukhipha leyo nkinobho ye-TAB, uzobona iwindi livela. Izobhala zonke izinhlelo zokusebenza ezisebenzayo, futhi uzothola ukuthi okulandelayo ohlwini kuqokonyisiwe. Uma ukhipha i-ALT, uzoshintshelwa ngokushesha kulolo hlelo.
Amandla we-ALT + TAB kuphela angadala ukuthuthuka okukhulu komkhiqizo. Awudingi ukususa izandla zakho kwikhibhodi bese uhambisa igundane uma ufuna ukushintsha phakathi kwezicelo ezimbili ezivulekile. Hamba uyozama manje. Chitha imizuzu embalwa ukwazi ukuthi i-ALT + TAB izwa kanjani.
Uma unaka i-ALT + TAB eyodwa, uzobona ukuthi empeleni iyashintsha phakathi kwe- zamanje application kanye ne igcine ukusetshenziswa uhlelo lokusebenza. Lokho kusho ukuthi uma ushintsha uthi, isiphequluli sakho sewebhu siye kwiprosesa yakho yamagama nge-ALT + TAB, ungashintsha emuva nenye i-ALT + TAB. Konke lokhu kushintshela emuva naphambili kungahle kuzwakale njengokuchitha isikhathi, kepha lokhu kunjalo ncamashi lokho sonke esikwenzayo lapho sicwaninga futhi sibhala. I-ALT + TAB ilungele ukuqhutshwa komsebenzi nsuku zonke.
Ukugcina imizuzwana embalwa uhambisa isandla sakho emuva naphambili usuka egundaneni mhlawumbe akubonakali kukuningi. Phindaphinda lezozikhathi ngamakhulu amaswishi njalo ngehora. Cabanga ukuthi ulahlekelwa ukugxila okwesikhashana lapho kufanele uthole igundane ngombono wakho wokuqonda bese uhudulela isikhombisi phansi ezansi kwesikrini nasemuva. Ukufunda kahle i-ALT + TAB eyodwa kuzoshintsha ngokuphawulekayo umkhiqizo wakho.
Okuthuthukile kwe-ALT + TAB
Kukhona okungaphezulu kakhulu kokuyisisekelo. Uma ushaya i-ALT + TAB kodwa ubambe inkinobho ye-ALT, uzobona zonke izithonjana zezinhlelo zokusebenza ezisebenzayo. Ungasebenzisa ukucindezela okuphindiwe kokhiye we-TAB ukubiyela emuva ezinhlelweni obuzisebenzisa esikhathini esedlule. Inhlanganisela ye-SHIFT + TAB iya kolunye uhlangothi.
Uma wake wazibamba ukopisha idatha kusuka kolunye uhlelo iye kolunye ngama-keytrokes, i-ALT + TAB ingenza isipiliyoni sakho sibe sesokusebenzisa kuphela ikhibhodi. Lokhu kungaholela ekuthuthukisweni okukhulu komkhiqizo.
Thatha isikhathi ufunde i-ALT + TAB. Uzoshesha ngomshini futhi ukwazi ukwenza umsebenzi omningi wenziwe. Kepha okubaluleke kakhulu, yazi ukuthi okhiye abanjenge-ALT basondele ukushintsha imodi wezinhlelo ezisizungezile. I-ALT ifana nomehluko phakathi kokusebenza etafuleni lakho nokukhuluma nocingo. Imayelana nokushintshela kwesinye isimo.
Ukushintshwa komongo kuyizindleko ezinkulu ekukhiqizeni. Njalo ukuphazamiseka kunika ithuba lokukhohlwa obukwenza. Thola ukuthi wenzani okudinga ukuthi ushintshe ukugxila kwakho, noma ngabe kusuka kukhibhodi uye kwigundane. Uzothola ukuhamba kwakho komsebenzi kushelele futhi uzokwenza okuningi.
Tags: i-alt tagumshini wokubhala
Ingabe Izinombolo Zabalandeli Abakhulu Ziyabala Ngempela?
Mar 25, 2010 ku-4: 32 PM
Umuntu engisebenza naye wake wangibiza ngokuthi 'ngikhubazekile wegundane' ngoba ngihlala ngisebenzisa isikhombimsebenzisi sokuqhafaza ukuzulazula. Kuthathe iminyaka embalwa ngaphambi kokuthi ngithole ukuthi izinqamuleli zokhiye zisebenza kanjani. Kuyathakazelisa ukuthi ngikholelwa ukuthi abasebenzisi beMac bebelokhu 'bevuzwa' ngama-keytroke wangokwezifiso enza izinto ezinhle. IWindows isibambile - kepha iningi labangane bami kumaMacs lihle ngokwazi zonke izinqamuleli… nokukhiqiza kwazo kuyakukhombisa!
UNourhan Seif El Nasr
Nov 16, 2012 ngo-6: 03 AM
I-athikili enhle ebengiyazi ukuthi ngingumsebenzisi we-pc ongazi